Any amin’ny kaominina 70 : maro ny fikambanana manohana ireo kaoperativa | NewsMada
Any amin’ny kaominina 70 : maro ny fikambanana manohana ireo kaoperativa
Fotoan-dehibe ho an’ireo kaoperativa eto Madagasikara ny fivoriana niarahan’izy ireo nanao nandritra ny herinandro lasa teo. Tanjona ny fampandrosoana ny sehatry ny toekarena sy sosialy. Mpitantana 100 mahery niara-nivory tamin’ireo mpanohana avy eto an-terana sy avy any ivelany, araka ny niantsoan’ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina azy ireo. Niarahan’izy ireo nifanakalohevitra tamin’izany ny fandrafetana politika sy ny lalàna vaovao mahakasika ny kaoperativa.
Maro ireo fikambanana, eto an-toerana sy any ivelany, nantsoina nandray anjara nanohana azy ireo : Adra, AIM, CRS, GIZ, Helvetas, Land’Olakes, CTA, NCBA-CLUSA, Usaid. Samy manana ny fandaharanasany ireo, mpanohana ara-teknika, mpampiofana sy mpamatsy vola. Avy any amin’ny kaominina 70 amina faritra 16, nandray anjara tamin’ny fivoriana. Fanarian’izy ireo ny hivoaran’ny kaoperativa, hanana fomba fiasa vaovao amin’ny fitadiavana lalam-barotra, fandraisana anjara amin’izay asa fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy any amin’ny faritra misy azy avy, hahitana tombontsoa iombonana eto amin’ny firenena.
Niarahan’izy ireo nifanakalo hevitra, ny lafiny teknika hoentina mampiroborobo ny kaoperativa eto an-toerana hiatrehana ny ho avy ; fandrafetana sata vaovao sy ny fifampifehezana anatiny. Iankinan’ny fampandrosoana betsaka any ambanivohitra ny asan’ireo kaoperativa ireo, mahita izany ireo fikambanana isan-tsokajiny ireo matoa manohana, manentana hanova fomba fiasa. Tombontsoan’ny ho an’ny tantsaha ny fidirana amin’ireny kaoperativa ireny, hahazoan’izy ireo miaro-tena amin’izay mety fanararaotana ataon’ireo mpanam-bola mpanangom-bokatra.